Indlela yokwenza i-backlink esebenzayo ngezimpahla ezibonakalayo ezifanele?
Yileyo ingxoxo efanele yesifundo, ikakhulukazi ngenxa yokuthola inqubekela phambili ehlala njalo nephrofayela yakho ye-backlink ayikwazi ukutholakala kuphela ngokudala izimpahla ezibonakalayo, ngisho nekhwalithi ephakeme kakhulu. Yiqiniso, kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukwenza izidalwa ze-backlink zisekelwe ngezimpahla ezinhle ezibonakalayo. Yini eyenza ifa elihle elihle? Kuthathwa ngokujwayelekile, impahla enhle ebonakalayo imele okuqukethwe okukhasiwe okwesikhashana okuzosiza ekukhiqizeni amasheya amaningi, okulandelayo, ukubhalisa, ukuthandwa, njalonjalo, ngokuvumelana nokwamukela ukwamukela inqubo yokuzihlanganisa yemvelo. Kodwa into yukuthi yonke impahla ephathekayo ngokwayo idinga ukukhushulwa - futhi lo mbono olula kakhulu usalokhu unqunywe ngabathengisi be-digital kanye nama-SEOs. Yebo, bayakwazi ukwenza ukusebenzisana komsebenzisi nge-backlinks okufanele ngivume, isibonelo ngezindlela eziphambili zokusabalalisa okukhangayo nokukhangayo kokuqukethwe. Kodwa ake sibhekene nayo - yonke imisebenzi yokukhuthazwa kwe-intanethi nokumaketha ngokuvamile ayinakekelwa, ngisho nabathengisi bewebhu be-intanethi nabanikazi bamabhizinisi ase-intanethi. Yingakho ngezansi ngizozibona zonke ngezindlela eziphumelele kakhulu ukuze wazi ukuthi ungenza kanjani izixhumanisi ezingaphezulu ngokumaketha kokuqukethwe.
Ngaphambi kwanoma yini enye, nakhu okudingeka sikuthathe kalula - ukumaketha kokuqukethwe akuphelelanga lutho ngokunikeza ukuthenga ukuxhumanisa ukuthenga, okungenani ngqo. Ngisho ukuthi isu lakho lokuqukethwe elithathwe esikalini alikwazi ukusetshenziselwa ukukhonza njengesixhumanisi sokuxhumanisa. "Kodwa okwenziwe lapha kuhlanganisa ingxenye yomzamo wakho jikelele - ngokuqondile ukukhuthaza ukuthengwa kokuxhumana okuqhubekayo kuwebhusayithi yakho yebhizinisi noma ibhulogi ngenxenye yokuhweba. Ngakho, ngezansi kufika uhlu olufushane lwamaphoyinti e-bullet ukukusiza ngalokhu.
Ukuhlaziywa kwesikhashana - into yokuqala okumele icatshangelwe ngenxa yokubandakanya isixhumanisi sakho kanye nomkhankaso wokuzuza. Konke okudingayo ukuqala kwangempela kwe-kickass igama elibonakalayo ngaphakathi kwe-niche efanele noma embonini yebhizinisi - indawo edala amathuba okukwakha isixhumanisi.
Ithuba lokudlulisela phambili - into elandelayo ebalulekile okumele ihlolwe ngempahla yakho. Yiqiniso, kunezindlela eziningi nezinhlobo ezahlukene zokusetshenziswa, ikakhulukazi kuxhomeke ekuncintisaneni okukhulu kwemakethe, uhlobo lokuhlukahluka kwamakethe, indlela yokwehlisa imizamo yokuhlangabezana nezinhloso, kanye nokuthola amathuba ahambisana nesabelo sakho sebhajethi - imigomo yokukhushulwa kwe-intanethi ngokwayo, kanye nokuhlelwa nokuhlelwa kokuhlelwa kokuqukethwe.
Ukuhlaziywa kokuncintisana ukwenza okuningi kunamacebo okuthola ukuxhumana okuphezulu asetshenziswe ngabadlali bakho bemakethe, ngokuvumelana nokuba namathuba amaningi okugwema izigxobo ezimbi ezivele zibophe izitha zakho ezingenangqondo.
Ukubandakanyeka komphakathi ukuthola ukutholakala kwe-online kwamasheya, ukukhuluma, izixhumanisi, nesizukulwane esiholela phambili.
Ukufaka isicelo sokwakhiwa kwesixhumanisi esiphukile nokusetshenziswa kahle kwezithombe eziqondene.
Ukuthuthukisa ukusebenzisana kwebhizinisi, ukujulisa ukuhlanganiswa kwesigaba esiphambene nokubonisana ngokubambisana ngezinhlelo ezizayo zokubandakanyeka komphakathi nakakhulu nokuthengwa kwezixhumanisi Source .